Howlgal Al-Shabaab xubno looga dilay oo ka dhacay Bakool | KEYDMEDIA ONLINE
Howlgal Al-Shabaab xubno looga dilay oo ka dhacay Bakool
Waxay Ciidamada la wareegeen Saldhig Al-Shabaab kasoo abaabuli jirtay weerarada ka dhanka ah degmada Waajid.
WAAJID, Soomaaliya - Ugu yaraan 9 xubnood oo kamid ah Al-Shabaab ayaa la sheegay in lagu dilay dagaal qaraar oo tan iyo shalay ka socday duleedka degmada Waajid, ee gobolka Bakool.
Saraakiisha horkacaysa duulaanka ayaa sheegay in jab xoogan ay ku gaarsiiyeen Al-Shabaab dagaalkii shalay dhacay, kaasoo sidoo kale kula wareegeen saldhigii ay kooxda kasoo abaabuli jirtay weerarada.
Waxaa loogu tala-galay howlgalka in lagu furo jidka ay Al-Shabaab mudada 7 sano go'aaminta ku haysay, taasoo sababtay sicir barar dhanka maciishadda iyo inay dadka degaanka Waajid soo wajahaan dhibaatooyin bini'aadanimo.
Gobolka Bakool waxaa ku sugan Ciidanka Itoobiyaan ah, oo aad u fara badan kuwaasoo qaadeynin howlgal jidka lagu furayo, waxaana sahayda loo mariyaa hawada, oo diyaarado ugu geeyaan saldhigyadooda.
Al-Shabaab waxay go'doomisay dhamaan degmooyinkii laga saaray Bakool, Baay, Hiiraan iyo Gedo, oo aan illaa hadda la isku gudbi karin, iyadoo joogsaday ganacsiga iyo isku socodka.